I-K-Tek ibonisa i-KlassicPro Boom Poles-NAB Bonisa iindaba nge-Broadcast Beat, i-Broadcastaster yase-NAB Show Show - NAB Bonisa LIVE
ikhaya » iindaba » I-K-Tek ibonisa i-KlassicPro Boom Poles
I-K-Tek ibonisa i-KlassicPro Boom Poles
K-Tek, inkampani eyazisa kuqala e-USA, i-graphite, i-telescoping pole kwiminyaka eyi-25 edlulileyo, ivakalisa intuthuko enkulu kwi-Klassic Boom Poles. Ukuqhubeka kunye neemfuno zomqhubi wezobugcisa zanamhlanje, i-KlassicPro entsha iquka izinto eziphambili ze-original, kubandakanywa: iibhafu ze-graphite eziphezulu ezingenakubumba, iisiseko ze-modular, ukukhiya ngokukhawuleza nokuzinza. Isakhiwa kwisitolo sokuqala eVista, eCalifornia, nganye iKlassicPro yenziwa ngononophelo olufanayo kunye nengqwalasela yenkcukacha njengento yokuqala.
Ulwakhiwo olutsha lunikeza ukutshintshana okwenyukayo. Yilapho i-headpiece entsha ye-K-Tek ikhutshwa khona. Ikhanda lokuhlaziya kwakhona lamanje limane likhanye kwaye licime ityhubhu ngokufanelekileyo. Ikhefu yokukhetha ingasuswa okanye ifakwe-ngaphandle kokukhangela. I-poom pole iguqulwa ngokukhawuleza ibe yi-cabled, i-coil cabled, iqhagamshelwe ngokuchanekileyo okanye nge-transmitter phezulu okanye ngezantsi. Akukho ukuguqulwa kwamathuba okuchitha ixesha kwaye akukho mfuneko yokuthenga inkqubo entsha ngokupheleleyo ukuthobela ukutshintsha kweklabhu.
Isicatshulwa esicatshulwayo senza ukulungiswa kwakhona kwenkundla. Ukuxhasa le nto, i-K-Tek iye yakha ikhebula yekhoyili yezinga eliphezulu elinomxholo omtsha, umxhasi we-angle ophantsi. I-KlassicPro Cable entsha ifaka i-werge gauge wiring kunye ne-aluminium yokukhusela ukuze ibe yomelele kwaye ikhuselwe yi-ultra frequency (RF). Isixhobo esitsha seKlassicPro saseNtshonalanga ye-Angle sisincinci, sikhanyisa, sisebenziseka, kwaye senziwe kunye nesithandwa Neutrik isixhakaxhaka njengesiseko sayo. Ukuxhaswa okutsha kwe-solid strength kwenza i-Right Angle connector ephawulekayo ngokukhawuleza ngenkathi ibambelela ngokukhuselekileyo i-wiring endaweni. Njengenzuzo eyongeziweyo, ukuxhomekeka kokuxhumeka kunokutshintshwa ngokususa nje izikhonkwane ezimbini, ukujijizela kwindawo efunwayo, kwaye ukuyivala kwakhona endaweni. Ezi mphuculo zonke zidibanisa umthwalo we-lighter onqwenela kakhulu kwi-pole.
I-K-Tek iye yenzelwe izibonda ezinzima ngakumbi kwaye zinexesha elifutshane eliwehliweyo elikhethwa kwimeko yokuvelisa namhlanje. I-KlassicPro igcina ubunzima bokuqala bokukhanya kweethubhu, kodwa izixhobo ezintsha zendlela yokudibanisa zinamandla. Kwakhona, ukongeza isahlulo sesithandathu kunye neethubhu ezibanzi kukhulisa ukuqina kwaye kulungiselelwe ukulungisa ibhalansi. Isiphumo siphucuzo esheshayo kunye nokulawula komsebenzisi kwemakrofoni.
Enye inzuzo entsha itshintsho kwiikholeji zokuvala. I-K-Tek yenkqutyana yokuthunjwa yenkcubeko iye yaguqulwa ngokugqithiseleyo okwangoku kubonakala ngokugqithiseleyo ukuvumela ukongezwa okuthe gqolo kwecandelo ngalinye. Inkqubo entsha yokugcoba kunye kunye nokutshintsha i-outer dimples ukuya kwi-divet ye-oval inikezela kakuhle kwaye ivakale ngakumbi xa uvula nokuvala ikolya nganye. Ukugqitywa phakathi kwama-tubes kuye kwaguqulwa ngoko i-KlassicPro ivuleka ngokukhawuleza kwaye ivaliwe.
Iipolisi ezintsha zeKlassicPro zishiswe ngesandla ukuze zisasaze isandi sokusingatha. Baya kwikhetho ye-4 yamacandelo amathandathu: 9 '(KP9), 12' (KP12), 16 '(KP16), kunye ne20' (KP20), ubude obude. Iikhamera zekhoyili kunye neekhekhthi zeKhekhthi ezichanekileyo zingathengwa ngokwahlukileyo okanye kwiphakheji ye-boom pole yangaphambili. Iziseko ze-XLR eziphantsi kwe-XLR (KPCCR), i-Flow-through bases (KPFT) kwaye ithandwa Kick SideI-adapter ye-Transmitter (KPTA) iphinde iphuculwe.
I-K-Tek KlassicPro Boom Poles ifumaneka kumthengisi ogunyazisiweyo we-K-Tek. Ngolwazi olungaphezulu lwe-imeyile [Imeyile ikhuselwe] utyelelo www.ktekpro.com
Ekubeni isiseko kwi-1996 nguManfred N Klemme, uK-Tek uye waxhasa ihlabathi elilalelwayo ngamathuluzi amatsha ukwenza ukuba injini yomsindo kunye nemisebenzi yomqhubi ilula. Ngomnqweno wokuphulaphula, umsebenzi wokuqala kaManfred wawukuyila nokuvelisa umgca we-US eyenziwe izibonda eziqhathaniswayo, ezinamandla kwaye zinobubele bokuba abantu baqaphele. Umsebenzi ophunyeziwe-ku-1999 K-Tek wanikela i-Award Achievement Award evela kwi-Academy ye-Motion Picture Arts kunye neSayensi ye-Klassic Boom Pole. Ukususela ngoko, uK-Tek uzuze amanye amaxabiso amaninzi kunye nedumela lokwenza ngokugqithiseleyo nokwakhiwa kakuhle, iimveliso eziphambili zomsindo ezibandakanya: i-Avalon graphite kunye ne-aluminium boom poles, i-Shark Antenna kunye ne-windscreen. Umgca we-Stingray okhulayo we-K-Tek uquka, Iingxowa ezixubekileyo zengxube, i-Waist Belt, i-back Harness Audio Audio, kunye neengxowa zokufikelela kunye neengxowa. Tyelela: www.ktekpro.com.
Ulwazi Lulungiswe nguLux Communications: [Imeyile ikhuselwe]
Ngezithombe ezongezelelweyo kunye nezinye iindaba, nceda uye ku www.aboutthegear.com
Izithuba ezandwendwe nguVika Safrigina (ndinibone nonke)
UDan Kneece Powers off bebob Micros for Rhode Island Indie - Agasti 22, 2019
I-PRG Ivula indawo ye-VER yeCamera yokuLungiselela eBrooklyn eBrooklyn kuphela kweZiko lokuMisa leKhamera, ukuKhanyisa kunye neZiphumo zeTekhnoloji yeMotion Photo kunye nosasazo. - Julayi 23, 2019
I-K-Tek ibonisa i-KlassicPro Boom Poles - Julayi 9, 2019
Iintetho kunye nemisrya Injini yeVidiyo	2019-07-09
Previous: Tedial ukuvula ii-SMARTLIVE MULTI SPORT Configurations kunye neZibonelelo zeeNkcukacha zeeNkcukacha zoPhicotho lweMveliso kunye nokuSasazwa kwi-IBC 2019
next: Abanikazi bezemidlalo bamazwe ngamazwe kunye nabaququzeleli be-ASO bonisa isivumelwano seminyaka emininzi yokusebenzisa i-Globecast Digital Media Hub ngokubelana ngokubambisene